Umu umuaka Ubongo, ihe osise nke onye Tanzania na acho Africa - AFRIKHEPRI
Ubongo ụmụaka, ihe osise Tanzania na-achọ Africa
A na-eji ụda olu na-ekwu okwu n'ọfịs nke Ubungo Media. Na obere, studio studio setịpụrụ na ala nkeoghere oghereCleng'a Ng'atigwa, otu n'ime ndị na-azụ ise nke Tanzanian a bụ ọkachamara na mmepụta eserese, na-ede ihe ndị dị ọhụrụ nke Mama Ndege, nnụnụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma na-achị ọchị, ebe atọ ndị na-eme egwuregwu 3D nọ n'ọrụ n'azụ kọmputa ha. N'ime ụbọchị abụọ, ọhụụ ọhụrụUbongo Ụmụaka ga-agbasa na TBC1, ọwa telivishọn nke Tanzania.
A tọhapụrụ maka oge mbụ na Jenụwarị 2014, Ubongo Ụmụaka bụ nke mbụ na-agba ọsọ "Ndị na-eme ihe nkiri Tanzania na-emepụta na ọkụ na Tanzania". Ihe omumu ya, lekwasịrị anya na mgbakọ na mwepụ na sayensị, na-egosi ihe omimi nke ụmụ atọ na ụwa nke ụwa na-ekwu.
N'ihi otu okwu SMS nke nwere ike ịnweta na ọnụahịa nke 2 cents Euro 24 awa, ụmụaka nwere ike isonye na nyocha nke isiokwu ha tụlere n'oge ngosi ahụ.
"Mmadụ nde 9 nwere ntinye TV na ntinye mkpanaka na-eme ihe karịrị 65%. Anyị mepụtara ihe nkiri nke na-agbanwe maka teknụzụ dị na Tanzania iji ruo ọtụtụ ụmụaka dịka o kwere mee, kọwara Cleng'a Ng'atigwa.
N'ime ọnwa ole na ole, ọ na-aghọ ihe omume kachasị anya na mba ahụ nwere ihe kariri otu nde ndị na-ekiri kwa izu. Ubongo Ụmụaka a na-agbasakwa n'asụsụ Bekee n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Africa site na satellite Swahili nke Satellite, na-ekwu Nisha Ligon, onye na-akwado ya na onyeisi oche nke Ubongo Media.
Mgbe ọ nọsịrị otu afọ na Dar-es-Salaam dịka akụkụ nke mgbanwe nke mahadum ma mezie akara mmụta ukwu na London na-ahụ maka nkà mmụta sayensị na nkà mmụta sayensị, nke a bụ American nke dị afọ iri atọ, nwere ntutu isi na ihu nwatakịrị, kpebie na 2013 iji dozie ya na Tanzania.
"Achọrọ m iji ihe ọmụma m na-enye ndị nkụzi mpempe akwụkwọ na mba ebe enweghị ihe dị otú ahụ. N'oge m na-amụrụ ihe na Dar-es-Salaam, enweghi ntụrụndụ maka ụmụ m na ọdịda nke usoro agụmakwụkwọ Tanzania. ", ọ na-ekwu.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ ugbu a na-arụ ọrụ 15 na-arụ ọrụ oge niile ma na-aga ịkwaga na ụlọ ọrụ ọhụrụ, nke na-eme ka ụlọ ọrụ na-eme ihe nkiri, Nisha Ligon na-echeta oge mgbe ndị nnọchiteanya ise ahụ zutere na ọ ga-arụ ọrụ. "Anyị nile nwere ọrụ ọzọ. Anyị kere mmalite nke isii na-enweghị usoro na nke aka anyị ", echeta onye na-emepụta ihe.
Bukwa ukwuu n'ime onwe investors na mkpọsa crowdfounding (ejiji crowdfunding site na web), Ubongo Media kemgbe-enwe ike na-eto eto nke ọma na akụkụ ekele na ihe nkwado nke Tanzania akụ CRDB na ụtụ N'ịbụ na agbasa ozi n'ikuku nke usoro ihe omume na Ọwa Satellite Swahili.
"Anyị welitere 50 000 euro ekele maka mkpọsa ìgwè mmadụ na CRDB nyere anyị envelopu nke ọtụtụ iri puku euro. Ma, ọtụtụ n'ime ego anyị na-akwụ bụ iji kwụọ ụgwọ ọrụ anyị. Ụdọ ndị ahụ na Tanzania adịghị ego. Ọchịchị bụ ịkwụ ụgwọ iji kwasaa, kọwara nwa agbọghọ ahụ.
Mmalite na-achọ ego maka oge nke abụọ nkeUbongo Ụmụaka. Iji gbasaa na French na-asụ n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Africa, Ubongo Media na-asụgharị usoro ugbu a na French. Ụlọ ọrụ ahụ na-achọ ịmepụta ihe ngosi ọhụụ ọhụrụ iji kụziere Bekee na ụmụ sitere na 3 ruo 7 afọ.
Mụta ihe banyere http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/05/02/ubongo-kids-un-dessin-anime-tanzanien-a-la-conquete-de-l-afrique_4626343_3212.html#GELvGfp27dHQzt7w.99